Ala Ala Ala - WRSP
UMUAKA STATE ISLAMIC
1999: Abu Musab al-Zarqawi zutere Osama bin Laden na Afghanistan wee gaa n'ihu ịtọ ntọala ogige ọzụzụ jihadi.
2001: jitù jihadi nke Zarqawi, Jama'at al-Tawhid wa'l-Jihad (JTL), malitere ọrụ na Jordan.
2003 (Machị): Mwakpo US nke Iraq mere; Zarqawi laghachiri Iraq na JTL iji buso US agha
2004 (Septemba): Zarqawi kwupụtara iguzosi ike n'ihe nye Osama bin Laden ma degharịa aha otu ya al-Qaeda na Iraq (AQI).
2006 (June): Ugbo elu nke US gburu Zarqawi; Abu Ayyub al-Masri putara dika onye ndu ohuru nke AQI.
2006 (October): al-Masri weghaara AQI dị ka Islamic State na Iraq (ISI) wee mata Abu Omar al-Baghdadi dị ka onye ndu.
2010 (Eprel): Abu Bakr al-Baghdadi pụtara dị ka onye isi nke ISI mgbe e gbusịrị al-Masri na Abu Omar al-Baghdadi na ọrụ ndị agha US-Iraq.
2013 (Eprel): ISI kwupụtara na ọ na-adọrọ Jabhat al-Nusra, otu ndị jihadi Syria nke jikọrọ aka na al-Qaeda; E degharịrị ISI dị ka Islamic State nke Iraq na al-Sham (ISIS).
2014 (February): al-Qaeda hapụla njikọ ISIS.
2014 (June): Mosul, Iraq, dabara n’aka ISIS; al-Baghdadi weghachitere aha ISIS dị ka Alakụba Alakụba (IS) wee kwupụta na ọ bụ caliph.
2014 (July): Mbipụta mbụ nke ISIS / IS online magazine, Dabiq, pụtara.
2014 (August): US bidoro mkpọsa ikuku ya megide ndị agha IS na Iraq; Ọ B IS bidoro iwepụ ọtụtụ isi ndị mmadụ kpọtara nke ndị eji eji n'Ebe Ọdịda Anyanwụ.
2014 (Septemba): Otu njikọ mba ụwa iji merie IS were ọnọdụ n'okpuru ntụzịaka US.
2014 (November): Otu ndị agha Islamist na-arụ ọrụ na Sinai nke Egypt, Ansar Beit al-Maqdis, kwupụtara na ha na-akwado IS ma weghachite onwe ya Wilayat Sinai ma ọ bụ mpaghara Sinai.
2015 (Jenụwarị): Ndị agha Islamist na Libya, na-akọwa onwe ha dị ka ógbè IS, Wilayat Tarablus, tọọrọ mmadụ iri abụọ na otu ndị ọrụ Egypt bụ ndị gbupụrụ isi isi n’ọnwa na-abịa maka uru dị egwu.
2015 (Machị): Boko Haram, ndị otu mgbagha Nigeria, kwupụtara nkwado ha na IS.
2015 (Mee): IS weghaara Ramadi, Iraq, na Palmyra, Syria.
Otu a maara ugbu a dị ka Islamic State agbanweela aha ya ọtụtụ oge site na akụkọ ntolite ya. Na akụkọ na-esote, a na-anabata njirimara dị iche iche maka oge kwesịrị ekwesị. Ọ dị mkpa iburu n'uche, na a na-ezo aka Alakụba Alakụba n'ọtụtụ, na mgbe ụfọdụ mgbagwoju anya, ụzọ: ụzọ abụọ ndị ọzọ a na-ahụkarị bụ Islamic State of Iraq na al-Sham ma ọ bụ ISIS na Islamic State nke Iraq na Levant ma ọ bụ ISIL; ihe dị iche na ebe a metụtara nsụgharị Arabic kasị mma "al-Sham," mpaghara a na-akpọbu Greater Syria, ụfọdụ na-ahọrọ Bekee "Levant". Na mba Arab, al-Dawla al-Islamiyya fi'l-Iraq na al-Sham ma ọ bụ Daesh aghọwo onye a ma ama, n'otu akụkụ n'ihi na okwu mkpirisi na-enye ohere maka egwuregwu satiric na enweghị nkwanye ùgwù na okwu Arabic ndị ọzọ. Somefọdụ ajụọla amamihe dị n'ịtụnye ntụnye aka dịka ISIS, ISIL ma ọ bụ Islamic State ebe ọ bụ na, na agha nke okwu nduhie na-aga n'ihu, ha nwere ike kwado n'amaghị ama nkwupụta nkwupụta nke ijide ikike ọchịchị ndọrọ ndọrọ ọchịchị Alakụba ziri ezi.
Alakụba Alakụba (IS) na-anọchite anya ọgbọ ọhụrụ nke usoro Islamist zuru ụwa ọnụ nke jikọtara echiche jihadi-salafi, mmekọrịta ọha na eze ọkaibe, agha okpuru, na ebumnuche iwulite steeti. Ọ pụtara dị ka ike kachasị mgbe ọgba aghara nke mba abụọ Middle East na-ada ada, Iraq na Syria, kwere ka ndị agha jihadist dịpụrụ adịpụ weghachite onwe ha ma kpọọ nkụda mmụọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akụ na ụba na mmekọrịta mmadụ na ibe ya na mpaghara ahụ. Ọganiihu dị mkpirikpi nke IS welitere ajụjụ ndị dị mkpa banyere njikọta ọchịchị nke mba-etiti na Middle East, amụma mba ofesi Western na mpaghara ahụ na ụwa ndị Alakụba sara mbara, volatility nke njirimara Muslim zuru ụwa ọnụ, yana ikike nke ndị otu jihadist ka mee ka ọdịda, dị adị ma ghọta, nke oge a.
IS nwere usoro agbụrụ na akụkọ nhazi, na njikọta ha dị mkpa maka ịghọta otu otu ahụ si etinye uche n'echiche ndị Alakụba nke oge a gbasara mmekọrịta okpukpe na mmekọrịta obodo. Mgbọrọgwụ echiche nke IS na-esite na Islamism (mgbe ụfọdụ a na-akpọ ya Islam ndọrọ ndọrọ ọchịchị) na ndị Alakụba na-ekwu na Islam, ọ bụghị mba mba, na-aza azịza maka mmepe na njirimara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ụwa Muslim. Maka ndị na-akwado ya mbụ, Hasan al-Banna nke Egypt na Mawlana Mawdudi nke India (na mgbe e mesịrị Pakistan), Islamism nyere ezigbo akụkọ na-egosi akụkọ ihe mere eme nke ọdịda anyanwụ nke nwere, na ọkara mbụ nke narị afọ nke iri abụọ, dọtara ọtụtụ ndị Alakụba dịka ụzọ kachasị dị irè iji guzobe ebe n'ime usoro ụwa niile. A kụrụ mkpụrụ nke Islamism, ọ bụghị na mberede, n'otu oge ahụ mba ndị Alakụba kachasị na-eche ihe ịma aka nke colonialism ihu ma na-ekpebi ọdịnihu nke ọchịchị ha. Na ụlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme nke caliphate bụ akụkụ nke ngwakọta a nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị njirimara Muslim.
Tọrọ ntọala na 632 OA mgbe ọnwu nke onye amụma Muhammad, e kpochapụrụ caliphate na 1924 mgbe mba ọhụrụ guzobere ọhụrụ nke Turkey, ndị fọdụrụ na alaeze Ottoman, tufuo ibu ọdịnala Alakụba ya ma mepụta Euro-centric (yabụ, nke ụwa) n'ọdịnihu. Na a ezi uche, mgbe ahụ, njedebe nke caliphate gosipụtara ịrị elu nke oge a na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Middle East, na Islamism pụta dị ka nzaghachi Islam-etiti, mgbalị iji meziwanye usoro nke jigidere njirimara dị iche iche maka ndị Alakụba, ọbụlagodi mgbe ụzọ a mimomiri ọtụtụ ụdị nhazi na nhazi ụlọ ọrụ dị ka mba ndị ọdịda anyanwụ. Imirikiti mba ndị Alakụba-toro-ajụ ịjụ nkwado doro anya nke Turkey maka ịgbaso amụma, mana ha nakweere usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị na usoro nke ụwa, gụnyere usoro iwu.
Kama ịla n'iyi n'akụkọ ihe mere eme, mmegharị nke Islamist, dị ka Society of Muslim Brothers in Egypt, nke Hasan al-Banna guzobere na 1928, ghọrọ olu nke mmegide ndọrọ ndọrọ ọchịchị, nke a na-egbochi mgbe ụfọdụ n'ụzọ obi ọjọọ. Na ikike okike nke ọtụtụ steeti na Middle East mere ka o siere ndị Alakụba ike ịkwado n'ihu ọha maka mbipụta ha nke ala Alakụba, na iwe iwe nke ime ihe ike ndọrọ ndọrọ ọchịchị site n'aka ndị Alakụba nyere ndị ọchịchị aka ike ihe mere ọ ga-eji gbasie ike na mmegharị ndị a. Ka oge na-aga, ndị Alakụba kewara ụzọ kachasị dị irè iji weta usoro Islamist ha dị mma n'ime usoro nke mba-nke nyere ohere obere itinye aka na arụmụka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-emeghe: ụfọdụ, na-agbaso ndu nke onye nkuzi Muslim Muslim Brotherhood Sayyid Qutb na isi mmalite ya. , Ihe omimi, ghọrọ agha dị ka nanị ụzọ a ga-esi kpochapụ ihe mere ha ji ghọọ ndị ọchịchị si n'ezi ofufe dapụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị obodo ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke; ọtụtụ, agbanyeghị, na-akwado ụzọ na-agabigaghị ókè nke ikwusa ozi ọma, izi ihe na ịgbasa ọsọ enyemaka.
Ihe a niile nwere ike iyi ka ọ dị anya site na IS, mana usoro ịlụ ọgụ n'etiti ndị Islamist n'ime mba ndị Alakụba-nke ka n'ọnụ ọgụgụ wee gbanwee n'ụzọ dị egwu mgbe agha Afghanistan-Soviet gasịrị, na-ebute jihaddism zuru ụwa ọnụ nke al-Qaeda, nke bụ ihe ndị bu ụzọ ka Ọ B.. Ndị Alakụba na-eme ihe ike na-enuga n'ọgbọ agha Afghanistan, na-ezube ịlụ ọgụ megide ndị mwakpo Soviet; ma a kwadoro ha na mbọ ha, na nzuzo n’oge ahụ, site na ọgụgụ isi ọrụ nke United States, Saudi Arabia, na Pakistan. Mgbe e merisịrị ndị Soviet, ụfọdụ n'ime ndị a na-akpọ "Arab Afghans" nọrọ na Afghanistan na ole na ole dọtara oku Osama bin Laden kpọrọ ka ọ gaa n'ihu jihad mana were ya zuru ụwa ọnụ. al-Qaeda gụnyere, nke akụkụ, nke ndị agha Islamist sitere n'akụkụ dịka Egypt, Saudi Arabia, Pakistan, Tunisia, na Jọdan, bụ ndị kpaliri atụmatụ Islamist na mba ha ma ghara ịmalite isi megide gọọmentị na-enweghị mmasị na ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị ha ( Wright 2006: 114-64). Dịka ọmụmaatụ, onye nke abụọ al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, ka a tụrụ mkpọrọ na Egypt maka itinye aka na Jihad Organisation, nke gburu Onye isi ala Anwar Sadat na 1981. Mana ihe gosipụtara ọdịiche dị n'etiti jihaddism zuru ụwa ọnụ nke al-Qaeda na ndị agha Islamism nke, sịnụ, Hamas na Palestine ma ọ bụ Jihad na Egypt, bụ njirimara ya nke West, karịsịa United States, dị ka egwu kachasị mkpa ma lekwasị anya nke jihad. Ebe ndị agha Islamist lebara anya na “onye iro dị nso” nke ndị Arab-Muslim elites dị iche iche (anya dị ka ndị si n'ezi ofufe dapụ), jihadist zuru ụwa ọnụ hụrụ "onye iro dị anya" nke West dị ka ihe ịma aka kasịnụ maka mmeri Islam. Ọzọkwa, ebe ndị Islamist na-emeru emerụ nwere, ka oge na-aga, mere udo na usoro steeti nke oge a, ọbụnadị na-ekwenye ịmalite otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na isonye na ntuli aka, jihadist zuru ụwa ọnụ bịara hụ njikọ dị otú ahụ dị ka ịmakụ ụzọ ndị ọdịda anyanwụ na ịrara ihe nke Islam.
Otu ihe bụ isi, mgbe ahụ, na ntoputa nke jihaddism zuru ụwa ọnụ bụ ọdịda nke Islamism ka a ga-etinye ya n'ime "ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-enye aka" nke mba-steeti na Middle East (Devji 2005: 2). Okpukpe Islamism zuru ụwa ọnụ n'ihi na ọ hụrụ ụzọ nke ike igbochi site n'aka ndị ọchịchị aka ike na-enweghị mmasị na ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya, na jihadism zuru ụwa ọnụ nwere ike gbanye mgbọrọgwụ karịa ọbụbụeze dị irè nke steeti ọ bụla. N'ihi ya, ọ bụ ọgba aghara nke Afghanistan na-ebibi agha nke mere ka bin Laden nwee ike ịhazi al-Qaeda, guzobe ogige ọzụzụ jihadist, ma gaa n'ihu ibuso ihe ọ kpọrọ "ndị agha Crusaders zuru ụwa ọnụ" agha. Ma ọ bụ ọgba aghara Iraq nke jere ozi dị ka ndabere nke akụkọ nhazi nke IS.
Onye mere ka ọgba aghara a ka njọ bụ Abu Musab al-Zaraqwi, onye jihadist nke Jọdan nwere akụkọ ihe mere eme nke obi ọjọọ omume ndị na-eyi ọha egwu. Mgbe ọ nọsịrị mkpọrọ na Jordan, ọ gara Afghanistan na 1999, ebe ọ zutere Osama bin Laden na, site na enyemaka bin Laden, malitere ogige ọzụzụ jihadi asọmpi dị nso. Ka ị na-ekerịta ọtụtụ echiche na ebumnuche al-Qaeda, Zarqawi nọọrọ onwe ya. Ọ hibere Jama'at al-Tawhid wa'l-Jihad (JTL), nke guzobere ndekọ banyere iyi ọha egwu na Middle East na Europe, nke niile dọtara uche nke ụlọ ọrụ ọgụgụ isi US. Ọ gbanwere isi ọrụ ya na Iraq mgbe US wakporo na 2003 iji buso ndị agha ọdịda anyanwụ agha. Ka ọ na-erule 2004, Zarqawi kwere nkwa ịkwado bin Laden, e degharịrị JTL dị ka al-Qaeda na Iraq (AQI). N'etiti 2004 na ogbugbu ya nke US gburu na 2006, Zarqawi lụrụ agha nke otu, ikekwe site na nkwado nke bin Laden, megide Iraqi Shi'a na-ekewa mba ahụ ma mee ka ndị Sunni nọrọ n'ogige nke AQI. Ya mere, ọbara bụ usoro Zarqawi nke mere ka Zawahiri baara ya mba banyere mkpa ọ dị izere ịhapụ ndị Alakụba site na ihe jihadist (Cockburn 2015: 52; Weiss na Hassan 2015: 20-39).
Mgbe Zarqawi nwụsịrị, iwu nke AQI dabara n'aka Abu Ayyub al-Masri, onye degharịrị nzukọ Islamic State of Iraq (ISI) ọnwa ole na ole ka nke ahụ gasịrị wee mata Abu Omar al-Baghdadi dị ka onye ndu. Site na 2007 gaa n'ihu, ISI nwetara nrụgide na-arịwanye elu site na Sunni Awakening, mbọ aka nke ebo Sunni na ndị agha US iji kpochapụ iyi egwu jihadist. Ka ọ na-erule 2010, ISI ahụla oke ọdịda ike ya nwere itinye aka na ndị iro, ma Shi'a ma ọ bụ ndị otu jikọrọ aka, na ogbugbu nke ma Masri ma al-Baghdadi yiri ka ọ kwadoro ọnọdụ a. Onye ndu ohuru nke ISI, Abu Bakr al-Baghdadi ketara oke nzukọ, ma nwepu nke ndị agha US site na Iraq na 2011 nyere oghere iji mee ka omume ndị na-eyi ọha egwu dị ike. Ndi ISI natara nkwanye ugwu site na agha obodo nke malitere na Syria na agbata obi na njedebe nke 2011 dika ngba aghara nke ogba aghara Arab. Ndi Sunni nke Syria nwere ogologo oge bilitere imegide President Bashar al-Assad, onye weputara nkwado ya site na ndi Alawite pere mpe (mpaghara Shi'i subsect). Otutu n'ime mmegide mbu nke ndi Sunni na Syria gosiputara ihe ndi ozo, ma ndi Islamist na ndi jihadist choro ya ngwa ngwa. N'ihi ya, ihe malitere dị ka ngagharị iwe zuru ezu megide ọchịchị iji rịọ ikike ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba maka ndị Sunnis ghọrọ agha okpukperechi okpukpe nke dọtara n'ike mpaghara, dị ka Turkey, Saudi Arabia, na Iran, na-ezube ịkwalite ebumnuche ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ha.
Ka ọ dị ugbu a, na Iraq, onye isi ala ahọpụtara ọhụrụ, Nouri Kamal al-Maliki, tinyere usoro nke usoro siri ike nke mere Shi'i imirikiti, na-akwụkarị ndị Sunni pere mpe na-achị obodo ahụ n'okpuru ọchịchị Satham Hussein nke Baathist. Ndi Sunnis nke Iraq enweelarị ọdịda dị egwu nke ike ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke akụ na ụba n'ihi atumatu de-Baathification ewepụtara n'okpuru ọrụ US, gụnyere mgbasa nke ndị agha Iraq. Echiche ha na-ewepụ ikike ha toro mgbe gọọmentị Shi 'na-achịkwa na Baghdad wusiri njikọ ya na Iran ike, na-akwado nkwado nke ndị agha Shi'i, ma na-ebo ndị Sunnis / Baathists ebubo na ha na-anwa inweta ike. Ngagharị iwe nke ndị Sunnis na Syria ghọrọ mkpọkọta ndị Sunnis na Iraq, na ISI nọ ebe ahụ iji nweta ọnọdụ ahụ. Oke mmiri ozuzo zuru oke nke ndi Sunnis na ndi isi ochichi Shi'i na Syria na Iraq nyere ISI ohere iji kpoo oku nke ndi mmadu ma tinye onwe ya n'ime oghaghara nke ochichi ndi mmadu.
Ngwaọrụ nke enyemaka ISI na Syria bụ otu ndị otu AQI jikọrọ aka, Jabhat al-Nusra (JN), nke guzobere onwe ya n'etiti usoro ndị agha mmegide site na mbido 2013. Na-ekwu na ọ zigara JN ka ọ nweta ntọala maka ISI na Syria, Baghdadi kwupụtara abụọ Otu dị iche iche agbakọtara iji guzobe Islamic State nke Iraq na al-Sham (ISIS). Onye ndu nke JN, Abu Muhammad al-Jawlani, jụrụ njikọ ahụ, na esemokwu dị n'etiti ISIS na al-Qaeda malitere, na Zawahiri na-anwa igbochi mpaghara Baghdadi nke Iraq. Esemokwu n'etiti otu ndị jihadist bụ ihe a na-ahụkarị na Syria, mana ọgbaghara dị n'etiti ISIS na al-Qaeda tụrụ egwu kewaa otu ndị bịara ịkọwapụta jihaddism zuru ụwa ọnụ. Ka ọ na-erule mbido afọ 2014, al-Qaeda na ISIS agọnarịala ibe ha, yana n’ọnwa June nke afọ ahụ, ndị ISIS ji obi ike na-aga agha na Iraq gụnyere gụnyere iwere Mosul, obodo nke abụọ kacha ukwuu na mba ahụ, yana “imebi oke ala” nke ukwuu. mkpọsa nke wepụrụ ihe mgbochi n'etiti Syria na Iraq.
Ebe oke ala dị n'okpuru ya, ISIS kwuru na oge nke Sykes-Picot Agreement, nkwekọrịta nzuzo nke na-ekewa Middle East n'ime ngalaba nke mmetụta colonial, mkparịta ụka na 1916 n'etiti France na Britain, abịala na njedebe, yabụ nwekwara echiche Western nke kewara ndị Alakụba na mpaghara: ịhụ mba n'anya. ISIS ji oge a kwuwapụta ntọala nke Alakụba Alakụba (IS) na nloghachi nke caliphate, Baghdadi kpọrọ “ọchịagha nke kwesịrị ntụkwasị obi, ”bụ́ onye ndị Alakụba gburugburu ụwa ji iguzosi ike n'ihe na nrubeisi. N'ngosipụta ihe atụ nke aha ọhụrụ ya, Baghdadi, yi uwe ndị ọdịnala, kwuru okwu Friday ahụ, na 4 July, na nnukwu ụlọ alakụba nke Mosul wee duru ọgbakọ ahụ n'ekpere. Okwuchukwu ya mere ka o doo anya na ụwa kewara abụọ ugbua, "ogige nke Alakụba na okwukwe, na ogige nke kufr (ekweghi ekwe) na ihu abụọ," na ndị Alakụba gburugburu ụwa ugbu a iwu ka ha kwaga steeti Islam na okwukwe chịrị (Dabiq 1: 10).
Ọ dị mkpa iburu n'uche na caliphate bụ akụkụ nke usoro ọhụụ nke usoro Bin Laden. N'ajụjụ ọnụ otu ọnwa gachara 9/11, o kwuru, sị: “Ya mere ana m ekwu na, n'ozuzu, nchegbu anyị bụ na umma anyị na-ejikọ ma n'okpuru Okwu nke Akwụkwọ nke Chineke ma ọ bụ Onye Amụma Ya, na mba a kwesịrị ime ka ndị ezi omume caliphate nke umma anyị… na caliph nke ezi omume ga-alọghachi na ikike nke Chineke ”(Bin Laden 2005: 121). Mana bin Laden na onye nọchiri ya, Zawahiri, nọgidere na-elekwasị anya na "onye iro dị anya," na-ekwupụtaghị usoro ziri ezi nke ga-ekwe ka caliphate ahụ ọzọ. IS ga-emesịa kwuo na ọ na-emejupụta ọchịchọ nke bin Laden, na-eweta bin bin Laden n'ime agbụrụ jihadi ya na ịkewapụ Zawahiri dị ka onye na-adịghị mma.
IS nọgidere na-enweta ókèala na Iraq na Syria, ndị ọrụ afọ ofufo si gburugburu ụwa bịarute, ọ na-ewute mba ndị dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ thatwa nke hụrụ ụfọdụ ụmụ amaala Alakụba ibe ha ịhapụ ndụ ha yiri ka ọ dị mma iji sonyere onye jihadist nzukọ kwadoro ịzụlite esemokwu ụwa (Taub 2015). IS bu ngwa ngwa ikwusa onyonyo nke ndi biara na West ka ha na-ere oku paspọtụ ha ma na-eti mkpu okwu jihadist. N'ezie, mkpasu iwe gosipụtara akụkụ dị mkpa nke mmekọrịta ọha na eze IS, na mgbasa echiche nke akwụkwọ ahụ ghọrọ ụdị a na-ahụkarị: Ndị otu Kristi nọ na Middle East na-awakpo ha, ụmụ nwoke e gburu na ụmụ nwanyị ka ha bụrụ ohu; Onye odeakụkọ Western jidere ma gbuo ya; otu onye ọkwọ ụgbọ mmiri nke Jọdan gbara ọkụ n'ime nnụnụ; Ijipt Coptic Kraịst jidere na isi en uka. IS mere ihe onyonyo nke omume ndị a n'ihu ọha site na soshal midia wee degharịa ha na mbipụta nke Dabiq, nke mara mma, magazin ntanetị nke asụsụ Bekee ọ malitere ibipụta na July 2014.
Usoro iheomume ndị a yiri ka ebumnuche jikọrọ mbọ na-eto eto, site na Ọgọstụ 2014 gaa n'ihu, nke ike mpaghara na ọdịda anyanwụ ime ihe megide iyi ọha egwu IS. Dị ka njikọta nke ndị agha aghara aghara, ndị US haziri, malitere ịtụkwasị ebe ndị siri ike IS, IS kwusiri ike na ịkwa emo na mwụfu ọbara ya. Maka IS, ịdọrọ mba ndị ọzọ na ọgụ na Syria na Iraq bụ atụmatụ iji gbasaa ọgba aghara nke jihadism zuru ụwa ọnụ na-eme nke ọma. Ma gbasaa ya: otu ndị jihadist dị n'Ijipt na Libya kwere nkwa na ha ga-eguzosi ike n'ihe nye Baghdadi ma gbanwee mpaghara ha nke nchịkwa mpaghara na "mpaghara" nke Ala Ala Ala; na mwakpo wolf wolf malitere ime na West dị ka ndị dịpụrụ adịpụ, ndị Alakụba na-ewe iwe gere ntị na oku IS: “Ọ bụrụ na ị nwere ike igbu onye ekweghị na America ma ọ bụ onye Europe — ọkachasị onye France na-asọ oyi ma na-asọ oyi — ma ọ bụ onye Australia, ma ọ bụ onye Canada, ma ọ bụ onye ọ bụla na-ekweghị ekwe ndị na-ekweghị ekwe na-ebuso Alakụba Alakụba agha, dabere na Allah, gbuo ya n'ụzọ ọ bụla ma ọ bụ etu ọ bụla ọ siri dị.Dabiq 5: 37).
Ka ọ na-erule mbido afọ 2015, ndị agha jikọrọ aka chụpụ ndị agha IS site na mpaghara ebe ha jibu na Syria na Iraq, na ịma ikpe ndị ọha na eze banyere IS na-eto gburugburu ụwa. Ndị na-ekwuchitere Coalition kwuru na ịchụ ndị isi na ọkwa ọkwa ebelatala ike onye iro, na ọ bụ obere oge ka a ga-emeri IS. Mana nsogbu ọ bụla IS nwere ike inwe, dị ka ọnwụ nke obodo Tikrit na Iraq, ọ gbakere n'ụzọ dị egwu n'etiti ọnwa May, mgbe ọ meriri Ramadi na Iraq na Palmyra, obodo Rom oge ochie na Syria. N'oge na-adịghị anya obodo ndị a dara ka IS bidoro njirimara ejiri ejima ya n'ọchịchị dị mma: igbu ndị iro akọwapụtara yana inye ndị ọrụ mmekọrịta. Akụkọ na-egosi na ndị ọhụụ ọhụrụ na-aga n'ihu na mpaghara ahụ, gụnyere site na West, ebe oku nke IS na-aga jihad na martyrdom na-aga n'ihu na-enwe mkpesa dị egwu nke na-egbochi nkọwa dị mfe. Ndi ndu ndi ndu ka ndi mmadu gbasiri ike ka ha merie IS ma kwe nkwa mmeghari ndi agha, ma ufodu ndi nkowa amalitela ikwu banyere IS dika ihe na-adigide na mpaghara a.
IS na-ele onwe ya anya dị ka ezigbo ndị fọdụrụ na Islam n'oge a, ma na-akọwa nkwenkwe ya nke ukwuu n'ihe metụtara ihe ọ jụrụ n'etiti isi okwu na obodo ndị Alakụba, nke ọ na-ewere dị ka ekweghị ekwe (kufr). Dị ka Islamism, IS na-adị adị dị ka nloghachi ma ọ bụ mweghachi nke ihe ndị Alakụba oge a tụfuru n'ihi mmetụta nke secularism na onye ndu unislamic. Dịkwa ka ndị Islamism na-alụ ọgụ, ọ na-egosipụta usoro nke echiche na omume otu puku afọ nke na-agbanwe ọha ọha ndị Alakụba, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ụwa dum, n'ọgbọ agha n'etiti ike nke ìhè na ike nke ọchịchịrị. Ogige a malitere na mpaghara mpaghara mgbe ISIS guzobere Ala Ala Ala wee kpọọ nkewa ọdịnala n'etiti ebe obibi nke Islam na ebe nke ekweghị ekwe (dar al-Islam , Dar al-kufr).
Mgbe IS guzobere isi obodo ya na-aga n'ihu na Raqqa, IS malitere usoro iji kụziere ndị ọrụ okpukpe (imams na ndị nkwusa) "usoro eziokwu". Ndị ahọpụtara isonye rụburu ọrụ na mpaghara a, mana ha chọrọ IS nkwado iji gaa n'ihu. Akwụkwọ bụ Sheikh Ali al-Khudair, onye ọkà mmụta Saudi Wahhabi a ma ama bụ onye amaara maka nkwado gara aga nke ọrụ jihadist dere maka akwụkwọ maka nzukọ ọmụmụ ihe otu ọnwa. Mkpesa ya dabere na ntọala ya siri ike na nkuzi nke onye guzobere Wahhabism, Muhammad b. 'Abd al-Wahhab, na njikere ya ibuso ihe ọjọọ nke afọ na ịkwado ịkpọpụta takfir (na-ekwupụta mmadụ kafir, onye na-ekweghị ekwe; ịchụpụ) megide ndị mmehie, ọbụlagodi na ha amaghị mmehie ha (Akuko Alakụba Ala 1: 3). Ọtụtụ ndị ọkachamara n'okpukpe ndị metụtara IS, ndị na-ahụ maka ịkụziri ndị Alakụba na ikpe ikpe okpukpe, bụ ndị Saudis nwere nkwenye siri ike na nkwenkwe Wahhabi nke alaeze, ọ bụ ezie na ọ bụghị ezinụlọ eze. N'ime mbipụta ya, IS na-ewepụta onwe ya dị ka Salafi-Wahhabi, na-agbasi mbọ ike maka mgbanwe ọhụụ "mepụtara" nke pụtara n'ime ọdịnala Alakụba mgbe ndụ nke ndị nna nna ochie dị nsọ (al-salaf al-salih), ndị akaebe akpọrọ Shi'is, Asharis, Mu'tazilis, Sufis, Murji'is, na Kharijis.
B embra nabatara usoro iwu okwukwe Salafism gbadoro ụkwụ na ịdị n'otu nke chi (tawhid) na ịjụ nkwenkwe ma ọ bụ omume ọ bụla na-emebi ịdị n'otu nke Chineke. Ọzọkwa, dị ka Salafism, na-etinye nlebara anya dị ukwuu na nkọwa nke esemokwu ederede, na-eme ka mkpebi ọ bụla dabere na Kur'an na Sunna na ịkọwa nkọwa ya dịka naanị eziokwu. N'ezie, nkwenye na ụkpụrụ omume na-agwa ihe niile IS na-eme, ma na-eje ozi dị ka ebe ire ere siri ike nye ndị Alakụba nke oge a na-achọ nhọta na ụwa nke ọkara eziokwu na ụgha. Ihe Muslim amata IS na-enye enweghị nha anya: ọ bụ ihe nkọcha na nrapara ya iji dozie nkwenkwe na omume, ọ na-emekwa ka echiche nke eziokwu na ezi omume na-enye ohere ikpe dị mfe nke ndị Alakụba ndị ọzọ (Haykel 2009: 33-38).
Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, ndị isi okpukperechi n'ọtụtụ mba boro IS ebubo na ọ bụ Kharijis ma ọ bụ na-agbaso usoro yiri nke Khariji, yana ụfọdụ ndị otu jihadi ebowokwa ebubo ahụ, na-anwa ịhapụ onwe ha site na ime ihe ike. Ndị Kharijis bụ ndị izizi ịrọ òtù malitere na akụkọ ntolite Alakụba (narị afọ nke asaa), amaara maka ịnụ ọkụ n'obi ha, igbu ndị Alakụba ibe ha e chere na ha si n'ezi ofufe dapụ, na nnupụisi megide ndị ọchịchị; aha nke ịrọ òtù a ka emegharịrị n'oge ugbu a iji mee ka ndị mmadụ gbasaa dịka Sayyid Qutb na iji dozie arụmụka banyere Muslim extremism (Kenney 2006). N'akụkụ ya, IS na-ele ebubo ịbụ Kharij dị ka okwu nduhie iji mee ka obodo ndị Alakụba belata site n'ikwe ka omume na echiche adịghị mma na-aga n'ihu. N'ihi ya, ọ naghị ezere ya, n'ihi ụjọ nke ịbụ onye a kpọrọ Khariji, site n'ikpe ikpe megide ndị Alakụba si n'ezi ofufe dapụ (na-akpọ ha ndị na-ekweghị ekwe, takfir) na ịwụfu ọbara ha. Iji gosipụta nkwa ya, IS azaghachila ebubo a na ụzọ abụọ: nke mbụ, onye na-ekwuchitere IS Abu Muhammad al-'Adnani sonyere na mgbanwe nkọcha nke iwu (ihe a na-ekwu na ọdịnala Alakụba dịka mubahala ) jụrụ Chineke ntaramahụhụ ma ọ bụrụ na IS bụ n'ezie Khariji. Nke a bụ akụkụ nke arụmụka ka ukwuu na ndị otu jihadist ndị ọzọ, n'oge otu onye isi kwuru na IS “dị oke njọ karịa nke mbụ” Kharijis (Dabiq 2:20). Nke abuo, n'ime ihe yiri ka ihe emeputara, IS kpughere cell Khariji na-aru oru n'ime oke ala ya ma na-eyi egwu ibuso caliphate agha. E mechara “kewaa cell ahụ ma nye ya ntaramahụhụ” dịka iwu Alakụba si dị, na-eme ka o yie ka IS kwetara ihe ike na-akwadoghị (Dabiq 6:31). Agbanyeghị, ịgbachitere ime ihe ike, ọbụlagodi ụdị obi ọjọọ ya, na-abịa n'ụzọ dị mfe IS. Ọkụ nke onye ọkwọ ụgbọ mmiri Jordan gbara ala mgbe ogbunigwe gbara na mpaghara IS bụ ihe atụ. Na nzaghachi nye ọtụtụ ndị nkatọ Alakụba bụ ndị ihe onyonyo vidiyo nke ogbugbu ahụ tụrụ ụjọ, IS wepụtara okwu maka ihe kpatara ntaramahụhụ ahụ bụ n'ezie sunna, dịka ihe atụ nke onye amụma Muhammad (Dabiq 7: 5-8). Ọ na-etinye aka n'otu ụzọ ntụgharị okwu ahụ mgbe a natasịrị nkatọ maka isi nke ndị eji eji. IS na-ekwusi ike mgbe niile na Islam bụ okpukpe jihad, ọ bụghị okpukpe udo dị ka ọtụtụ ndị Alakụba na-ekwusi ike.
N’ikwekọ n’usoro ngaghari ya, IS ekpughere ọnọdụ nkwenye ya na gburugburu ọgba aghara dị egwu nke o tinyegoro. N'ezie, a na-egosipụtakarị omume ya dị ka nkà mmụta okpukpe / iwu na-arụ ọrụ, ngosipụta nke ntinye ya, n'ụzọ dị iche na ndị isi Alakụba ndị ọzọ na ndị otu, iji chụọ ntụsara nke ndụ a na ndụ n'onwe ya iji sachaa obodo ndị Alakụba. Ọzọkwa, akụkọ nke IS banyere ọnọdụ ndị Alakụba ugbu a na-etinye ihe maka ọrụ maka ndị Alakụba ọ bụla kwere ekwe. Nhazi ya bu ihe ndi Qutbian na-ekwuputa obodo Muslim nke oge a (edeputara na Ihe omimi): ọ na-eri mmiri n'oké osimiri nke jahiliyya (amaghị ihe, pre-islam) mmehie, nke ndị ọchịchị na-emerụ emerụ na ndị isi okpukpe mebiri emebi lekọtara ya; Ndi Alakụba agbafuola ụzọ ha ma na-achọ nduzi, nke naanị otu nchekwa nke ndị raara onwe ha nye, ezigbo ndị kwere ekwe nwere ike inye; na jihad bụ naanị ihe ngwọta maka mkpochapụ ọnọdụ jahiliyya a nke metọrọ onye ọ bụla, otu ihe ngwọta ahụ Onye Amụma Muhammad mebere mgbe ya na ndị mbụ soro ya bilitere megide ndị iro ha na-ekpere arụsị na Mecca. B writes dere ọhụụ ọhụrụ na akụkọ a site na ịmepụta ebe nchekwa na oke osimiri jahiliyya, steeti Alakụba ebe e weghachirịrị caliphate yana iwu Islam. Ọhụrụ a n'ezie ebe, ndị Alakụba nwere ike akpatre bi ezigbo Alakụba ndụ. Ma ọ bụ, dị ka otu mbipụta nke Dabiq na-eme ka o doo anya, Alakụba ugbu a na-ebi ezi Alakụba ndụ. Ọ bụ ọrụ ọ bụla Muslim (fard ayn) ịkwaga site na jihiliyya gaa Ala Ala Ala (hijra), ido onwe ha n'okpuru ikike nke caliph, na ibu agha jihad. Nkuzi nke ala ala Alakụba na nkwupụta nke caliphate emeela ọrụ nkuzi ọhụrụ. Ndị Alakụba agaghịzi abụ ndị ihu abụọ, na-ekwenyere ndị na-ekweghị ekwe, na-enwe obi abụọ, na-egbochi itinye aka na jihad. Nhazi nke Ala Ala Ala Alakụba na nkwupụta nke caliphate ewetala “mkpochapụ nke isi awọ,” dịka ọbịbịa Muhammad mere ka e nwee nhọrọ doro anya n'etiti jahiliyya na Islam (Dabiq 7: 54-66). Onye ọ bụla aghaghi ime mkpebi, mee ihe kwekọrọ na ya, ma chee ihe ga-esi na ya pụta. Emeghị ihe abụghị nhọrọ, n'ihi na ọ pụtara ịkwado ndị na-ekweghị ekwe na ịdaba n'ezi ofufe.
Maka IS, ndị mmadụ na-arụ hijra ma na-etinye jihad na-ekere òkè na atụmatụ chi ka ukwuu nke chi nyere maka ụmụ mmadụ na-apụta na mpaghara: nnukwu agha na-abịa (al-malahim al-kubra) nke na-ebu ụzọ ma wụọ awa ikpeazụ. Syria nwere njikọ ya na ọtụtụ amụma oge ọgwụgwụ na ọdịnala Alakụba, na IS abịakwasịla ha iji gosipụta mkpa akụkọ ihe mere eme nke ihe omume mejupụtara n'ime caliphate yana iji kpalie ndị Alakụba isonye. Aha IS bụ akwụkwọ akụkọ, Dabiq, dịka ọmụmaatụ, na-ezo aka na saịtị dị na Syria, nke akaebe na hadith, ebe agha ikpeazụ n'etiti ndị Alakụba na ndị Rom (nke pụtara ịpụta Ndị Kraịst Ndị Agha Ntụte) ga-ewere ọnọdụ, nke ga-ebute oke mmeri ndị Alakụba, nke ihe ịrịba ama nke oge ahụ: mpụta nke àmà na-egosi (Dajjal), ọdịda nke Jizọs, na Gọg na Megọg. Okwu mkpasu iwe banyere amụma a, nke Abu Musab al-Zarqawi kwuru, pụtara na ibe ọdịnaya nke mbipụta ọ bụla nke akwụkwọ akụkọ ahụ: “A na-enwu ọkụ ahụ ebe a na Iraq, ọkụ ya ga-aga n'ihu na-esiwanye ike, site na ikike Allah, ruo mgbe ọ ga-agba ndị agha ntụte ahụ na Dabiq ọkụ. ”
IS na-egwu egwu banyere ụdị amụma a iji mee ka uche dịkwuo n'oge ya pụrụ iche n'akụkọ ihe mere eme na uru ọgụ ahụ dị, na Ala Ala Ala ma karịa, nke mebiri ikike mpaghara na nke ụwa ugbu a. Obere agha ọ bụla, okwu mkpali ọ bụla, mpaghara ọ bụla ekwuputara ọhụrụ, mwakpo ọ bụla na-eyi ọha egwu, mmeghachi omume ọ bụla nke ndị ọdịda anyanwụ, na ọhụụ ọ bụla nke Alakụba na-abịakwute Ala Ala Ala na-aghọ ihe ịrịba ama ọzọ nke amụma ndị na-emezu na ọbịbịa kachasị na-abịa. Islam mmeri ụwa. Ọbụna ihe dị ka agbaghasị ụkpụrụ omume Alakụba na-enye ohere iji kwalite oge pụrụ iche nke akụkọ ntolite nke a sịrị na ndị mmadụ bi ugbu a. Mgbe IS zutere Yazidis, ndị Mesopotamia oge ochie nwere usoro mmekọrịta nke nkwenkwe okpukpe na emume, na mpaghara Nineveh nke Iraq, ọ mesoro ha dị ka ndị na-efe chi ha (mushrikun), ọ bụghị ndị na-ekpe okpukpe efu, na, na-agbaso usoro iwu nke Alakụba, ha hụrụ na ha kwesịrị ịgbara ụmụ nwanyị ha ohu. Na mkparịta ụka ya banyere mkpebi a, IS dọọrọ uche gaa n'eziokwu ahụ bụ na "ekwupụtala ịgba ohu dị ka otu n'ime ihe ịrịba ama nke Oge Awa yana otu n'ime ihe kpatara" agha ukwu na-abịanụ (Dabiq 4:15). Nke a mere na e iletaghachiri ke ukperedem nsiondi Dabiq site n'aka onye edemede nwanyị, Umm Sumayyah al-Muhajirah, onye gbachitere mkpebi nke ịgba ụmụ nwanyị ohu ma jiri ya mee ihe ike iji maa ndị iro IS ọgụ: "Edere m nke a mgbe mkpụrụ akwụkwọ mpako. Ee, O okpukperechi nke kufr kpam kpam, anyị wakporo ma jide ụmụ nwanyị kafirah wee chụga ha dị ka atụrụ n'akụkụ mma agha… Ma ọ bụ ka gị na ndị na-akwado gị chere na anyị na-egwu egwuregwu ụbọchị anyị kwupụtara Khilafah na amụma usoro? Eji m Onyenwe m swearụọ iyi, ọ bụ n'ezie Khilafah na ihe ọ bụla o nwere nke nsọpụrụ na mpako maka Muslim na mmechuihu na mbibi nke kafir.Dabiq 9:46). Onye edemede ahụ mechiri mpempe akwụkwọ ahụ na mkpasu iwe na mkparị, na-ekwu na, ọ bụrụ na ohu Michelle Obama ga-abụ ohu, na ọ gaghị enweta ọtụtụ uru.
Ndị Alakụba sonyere IS bụ, n'ebumnuche ma ọ bụ na ha abụghị, akụkụ nke akụkọ ifo ya banyere apocalypse na-abịanụ, mana ha na-abanyekwa na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke akpọrọ ndị mmadụ ka ha bie ezigbo ndụ, yana ezinụlọ, ụlọ, na ọrụ. Site na mgbasa ozi mgbasa ozi ya, IS rịọrọ ndị Alakụba gburugburu ụwa ka ha kwaga mba Alakụba ọhụrụ ahụ, ma nye aka na naanị ebe ndị Alakụba nwere ike ịnụ ụtọ mkpụrụ nke ezigbo obodo Islam, ebe a na-etinye iwu Alakụba na òtù ụmụnna Muslim. na-abịa n'ụzọ nkịtị. A na-echebara ndị ọkachamara si ọkachamara ọkachamara n'ihi na ha ga-eweta nkà dị mkpa maka obodo na-eto eto. Abamuru nke ndụ n'ime oke ala Ala Ala Ala ka ekwuputara dị ka ihe onwunwe na nke mmụọ: a na-ekwe ezinụlọ ndị bịara ọhụrụ nkwa ụlọ (mgbe ụfọdụ ana-anara ha), e kwere ụmụ nwoke nkwa na nwunye (mgbe ụfọdụ ndị ohu), ma guzobe ọrụ mmekọrịta iji nye ndị nọ ná mkpa. A na-akọ na IS kwụrụ ụgwọ maka agbamakwụkwọ na oge ezumike nke ụfọdụ ndị agha ya. Ọ KWES toR great ogologo iji gosi na ọ hibela obodo nwere ike ịrụ ọrụ, ya na ndị uwe ojii Alakụba, nchịkọta na nkesa ọrụ ebere (zakat), ilekọta ụmụ mgbei, yana ụlọ ọrụ nchedo ndị na-azụ ahịa, nwere ọtụtụ ndị ga-akpọ mkpesa.Akuko Alakụba Ala 1: 4-6). N’isiokwu nke akpọrọ “Ohere n’ime Ala Ala Ala,” onyogho ndị mmadụ na-emezi idozi àkwà mmiri na okporo ọkụ eletrik, ihicha okporo ámá, ilekọta ndị agadi, inye ọgwụgwọ ọrịa kansa ụmụaka na-agba mbọ na mbọ ndị IS na-eme iji gboo mkpa ụwa nke ndị Alakụba (Dabiq 4: 27-29). Isiokwu ọzọ akpọrọ "Ahụike na Khilafah" na-ekwu na IS "na-agbasa ma na-emezi nlekọta ahụike ugbu a" wee mepee kọleji ọzụzụ maka ndị ọkachamara ahụike na Raqqa na Mosul (Dabiq 9: 25).
Ihe oyiyi dị otú ahụ a na-adị kwa ụbọchị, dị iche na nkwalite nkwado ndị ọzọ banyere agha ikpeazụ na oge ikpeazụ, na na foto nke isi ogbugbu mmadụ, ogbugbu mmadụ, nkume nke ndị na-akwa iko, na arụmọrụ nke okwukwe. Mana ọ bụ kpọmkwem ngwakọta nke ụwa na igbu ọchụ, nke atụmanya nke ụwa na nke puku afọ, na-enye mgbasa echiche IS. Ndụ nke ndị jihadis na Ala Ala Ala, o yiri ka a ga-ebi na nsọtụ mma nke akụkọ ntolite na apocalypse.
A mụrụ IS na gburugburu ebe obibi asọmpi jihadi, yana ọtụtụ mmegharị na ndị isi na-achọ ịdọta ndị agha na nkwado ego. Ha niile na-arụ ọrụ n'okpuru otu ọkọlọtọ Islamist, dabere na nkuzi nke ọtụtụ ndị na-eche echiche, site na Qutb ruo bin Laden. N'okpuru nduzi nke Zarqawi, ISI, nke bu ụzọ nye IS, gosipụtara onwe ya site na arụrụala obi ọjọọ ya, nke megidere ndị Shi'i Iraq. Mgbe IS kwupụtara nloghachi nke caliphate wee kpọọ al-Baghdadi caliph nke afọ, ọ kewapụrụ onwe ya iche na ndị otu mgbagha ndị ọzọ, wee mepụta ọgbaghara nke izi ezi na ịkpa ezi ọrụ n'ime ọkwa ndị jihadist. Ma Baghdadi bụ onye kachasị mma iji chee na ọrụ akụkọ ihe mere eme (ma na-aga n'ihu) bụ usoro iwu na iwu maka ọtụtụ ndị jihadists, ma kpalie nzaghachi dị oke mkpa. N'ihi ya, uche e nyere isiokwu nke ndu na nke mbụ nke Dabiq , nke pụtara n’okpuru isiokwu bụ́ “Nlaghachi nke Khilafah.” Mana IS kwusiri asọmpi ahụ, na arụmụka banyere izi ezi nke al-Baghdadi, site na mmeri agha onyonyo na soshal midia na ịkwado ikike ya na ikike agha na ala.
Nkwupụta obi ike na omume obi ike, mgbe ahụ, agbanwewo usoro a-cum-steeti ka ọ bụrụ ọrụ ndu kachasị mkpa. Ihe al-Qaeda chọsiri ike ibu post-9/11, IS aburuwo eziokwu, o mewo ya site na imeghari iwu nke ndi agha Islam: usoro mmeghari enyela ulo oru obodo (ohuru ohuru di egwu); ọdịiche dị n'etiti "onye iro dị nso" na "onye iro dị anya" abụrụla ihe na-adịghị mma, n'ihi na IS na-elekwasị anya ndị iro n'ebe niile; na ụwa dum elebara egwu ọhụrụ ahụ n'ihi na ndị na-ewe ndị agha na ụwa. Ọnụnọ nke ọnọdụ dị adị nwere ike ịdị ka ọ na-eme ka IS bụrụ onye na-adighi ike ịwakpo ya n'ihi na ọ nwere akụrụngwa nwere ike ịdabere. Mana IS ekwesighi ka ọ nọrọ ebe ụfọdụ iji rụọ ọrụ dị ka caliphate. N'adịghị ka mba nke oge a nke na-akọwa onwe ha site na oke ala ha, oke nke caliphate nwere ike ịgbanwe na-emebi emebi usoro izi ezi nke usoro iwu ya. N’akụkọ ihe mere eme, ọdịdị ala ndị caliphal na map na-agbanwe mgbe niile, dịka isi obodo caliphate. Emeghachitere na oge nke mba-mba, caliphate ahụ gosipụtara nkwarụ, ma ọ bụ, mana nke ahụ bụ kpọmkwem isi ihe IS chọrọ ime. Oge nke oge a adịghị mma nye ndị Alakụba, nyocha nke kpaliri echiche mgbanwe kemgbe narị afọ nke iri na itoolu. Ike Islam na ịdị ebube ọdịnala nke oge gboo kwụsịrị ka West pụtara dị ka etiti sayensị, ụlọ ọrụ, na isi obodo zuru ụwa ọnụ. Site na igbanwe map nke ọwuwa nke Middle East, yana nhazi na asụsụ ochichi, IS na-enwe olile anya ịkpọte ihe ọ ga-abụ ezi mmụọ nke mgbanwe salafi na ịtọgharịa elekere na ọgbara ọhụrụ. Ọ bụ ụdị echiche dị iche iche, mana nke na-emetụta ọtụtụ ndị na-aga n'ihu ịlụ ọgụ na akụkọ nke ndakpọ olileanya nke mere ka ndị mmadụ mara banyere oge a.
Maka IS, onye ndu bụ igodo maka nrụzigharị a n'ihi na ọ na-egosipụta ma usoro okpu nke ịhụ mba n'anya nke na-achịkwa mpaghara ahụ na mkpa ọ dị ndị Alakụba na-achịkwa ezigbo usoro Islam. Nke a bụ nkwupụta Islamist ogologo oge na IS ketara ma mezie ya, ọ bụ ezie na ọ jụrụ ndị Islamist ahụ mebiri emebi na-arụ ọrụ site na usoro ochichi onye kwuo uche iji gbanwee obodo ha, dịka Muhammad Morsi na Egypt. Dabere na IS, ma ịhụ mba ma ọchịchị onye kwuo uche ya adabaghị na Islam; caliphate bụ naanị azịza ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na jihad bụ naanị ụzọ isi guzobe ya. Ndị isi abụọ nke IS kwenyere na ha tọrọ ntọala maka nlọghachi nke caliphate bụ bin Laden na Zarqawi. Ndi otu Jihadi ndi ozo, tinyere al-Qaeda n’okpuru Zawahiri, ka aju n’ihi njikere ha n’iso ndi agha agha agha ma obu ikwenye na eweghachitala caliphate.
IS na-etinye aka na ndu ya na nkwupụta ọdịnala ọdịnala nke Alakụba, na-etinye Zarqawi n'ọrụ nke reviver (mujaddid ) nke Islam, akwukwo mgbasa ozi ama ama nke edeputara iji kọwaa bin Laden. Otú ọ dị, usoro nhazi nke IS na-ekpughe na ịmaliteghachi caliphate gụnyere ọtụtụ nnabata. Ewezuga aha ya, ọ bụghị eziokwu karịa ọdịnala ndị ọzọ mepụtara nke o ji asọmpi: mba. N'ezie, IS na-ahazi onwe ya ma na-achịkwa ókèala ọ na-achịkwa dị ka mba-mba. Ọ bụ iwu a na-achịkwa nke metụtara ntụaka na ọnụ ọgụgụ okpukpe. Baghdadi na-eje ozi dị ka "ọchịagha na onye isi" ma ọ bụ caliph, nwere ndụmọdụ nke ndị kabinet (shura kansụl mejupụtara nke ndị ọkachamara n'okpukpe) na otu usoro nke kansụl na-ekwu maka ọrụ dị iche iche nke steeti: ndị agha, ego, iwu, ọgụgụ isi, mgbasa ozi, nchekwa … Wdg. Dị ka caliph, Baghdadi nwere ikike kachasị, agbanyeghị na ọ nwere ike ịsị na ọ ga-ewepụ ya n'ọfịs site na kansụl shura. Ndị nnọchi anya abụọ nwere ikike ịchịkwa ihe na Iraq na Syria, n'otu n'otu, akpọkwala ndị gọvanọ ka ha na-ahụ maka ọchịchị kwa ụbọchị na mpaghara dị iche iche. Uzo esi eme ka enyere iwu a ka ogha, ma otutu ihe omuma a natara n'oge mwakpo na-egosi na IS achotala uzo igagh aga n'ihu ma gbasaa isi oru ya (Schmitt 2015). Nzukọ ahụ amatala otu esi anagide ọnwụ nke ndị agha jikọrọ ọnụ, na-echekwa ngwa iwu na njikwa ya, ọrụ akụ na ụba na ọnụọgụ ndị agha, nke bụ ịsị na ọ na-arụ ọrụ karịa na steeti.
O doro anya ókè etinyere mpaghara ndị ọzọ gafere Iraq na Syria (dịka, Egypt, Libya, na Nigeria). Ndị otu Jihadist dịka Boko Haram na Naịjirịa na Ansar al-Beit al-Maqdis na mpaghara Sinai dị na Egypt, ekwupụtala nkwado ha nye IS ma rite uru na ọzụzụ na nkwado ego. Mmekọrịta dị ogologo oge nke mpaghara ndị a, n'agbanyeghị, obi abụọ adịghị ya na ọ dabere na ike IS na-aga n'ihu yana uru ndị na-esi na nchigharị. N'agbanyeghị nke ahụ, ọrụ agha ọ bụla mpaghara ndị a dịpụrụ adịpụ na-arụ, ma ọ bụ nke ọma ma ọ bụ na ọ bụghị, na-alaghachi na oyiyi nke IS, na-egosi iru ya na ike ya. N'ikpeazụ, mgbasa ozi ọha na eze enyela ụzọ dị irè isi gosipụta ịdị n'otu nhazi nke mpaghara ndị a dịpụrụ adịpụ na IS etiti. Akaụntụ Twitter na-ejikwa njirimara mpaghara na nkwukọrịta emere n'okpuru ikike nke IS. E mepụtara vidiyo na-egbu egbu na Libya na Egypt na ndị jihadis na uwe ojii na ndị a mara ikpe na agba odo, na-eickingomi ihe ngosi dị egwu sitere na ọzara Iraq na Syria. Nke a nwere ike ịbụ ihe atụ karịa ihe akaebe dị mkpa nke njikọ njikọ, mana ike ihe atụ nke mgbasa ozi ọha na eze egosiworị na ọ bụ ngwá ọrụ dị irè iji kwenye ndị Alakụba ime "njem iji jihad" (Taub 2015).
IS enweela ihe ịga nke ọma site na igwu egwu na ọgba aghara ndọrọ ndọrọ ọchịchị na mmekọrịta ọha na eze na-aga n'ihu ma na-eme ka ịrị elu ya dị mfe. Dị ka nna nna ya zuru ụwa ọnụ al-Qaeda, IS na-arụ ọrụ nke ọma, na-eji ohere nke mba ndị na-adịghị ike na nrụgide na nkewa agbụrụ na nke ịrọ òtù. Ndụ ya dabere na ịga n'ihu na atụmatụ a, ọbụlagodi ka ọ na-anwa ịchịkwa mpaghara ndị ọ na-achịkwa dị ka steeti. N'oge ahụ, ihe ịrịba ama niile na-egosi na IS ga-anọ ebe ahụ ogologo oge karịa ka ọtụtụ ndị tụrụ anya ya. Fọdụ ndị na-akọwa Western kwuru na ndị gọọmentị tụgharịrị uche na nguzo ha gbasara IS wee bido ịmalite ya dị ka onye rogue karịa mba ndị na-eyi ọha egwu. Ndụmọdụ ndị a na-egosipụta ọnọdụ dị egwu na Syria na Iraq, ọgba aghara nke Middle East na-esochi ọnwụ ọnwụ na mmiri Arab, na enweghị ezigbo ọganihu megide IS site na ndị agha njikọ. Ndọrọ ndọrọ ọchịchị nkewa ekewaala nke ọma na Syria na Iraq, yana, ọbụlagodi na a ga-ewepụ IS echi, enyo na ịkpọasị ga-adịgide ruo ọtụtụ iri afọ. O nweghi obodo ọ bụla ga-alaghachi na oke oke agha ya; ọnọdụ ọnọdụ geo-ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọhụrụ ga-eme ka ntoputa nke steeti Sunni dị iche, njikọta nke mpaghara ndị Sunni kachasị na Syria na Iraq. Tupu eziokwu a na-abịanụ nwere ike ịmị mkpụrụ, agbanyeghị, njikọ ndị agha ga-emerịrị ọnọdụ ahụ ugbu a. Bọmbụ a na-atụ anya ezubere erute oke nke arụmọrụ ya, ndị ike ọdịda anyanwụ chọrọ izere itinye ndị agha ha n'ọnọdụ ọnọdụ ọgụ. Ndị agha Iraq egosibeghị ntụkwasị obi, belụsọ na ndị agha Shi'i na-akwado ha, ọnụnọ nke Shi'a na-alụ ọgụ na mpaghara ndị Sunni kachasị na-eweta nnukwu nsogbu dị iche iche nkewa nkewa nkewa. N'agbanyeghị nkwupụta nke ịdị n'otu mba na nkwa nke ikekọrịta, gọọmentị Shi'i na-achịkwa na Baghdad enwebeghị ike imeri ụmụ amaala Sunni ya. Ọnọdụ dị na Syria adịghị mma, yana ọtụtụ ndị nnupụisi, ụfọdụ ndị ego na ụfọdụ ndị Islamist, na-ama ọchịchị Assad aka na, oge niile, ibe ha. Ogologo oge, imeri IS ga-achọ ihe karịrị nzaghachi ndị agha. Usoro mgbochi iyi ọha egwu na-adịte aka abụghị ihe a ga-eji dochie mgbanwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na akụ na ụba ogologo oge na Syria, Iraq, na Middle East.
Ka ọ dị ugbu a, ọnọdụ dị iche iche apụtala, na-enye IS oge iji kwado ikike ya. Ike IS nwere ike ịchịkwa mpaghara ndị ọ na-achịkwa, yana ị nye ọrụ dị mkpa, tụrụ ọtụtụ ndị na-ekiri ya anya. Mana ihe ịtụnanya ahụ dị n'akụkụ buru ibu n'echiche bụ na IS bụ n'ezie otu jihadist-eyi ọha egwu, yana dịka mbọ a na-agba mbọ iji mebie ọbụbụeze nke steeti ndị dị ugbu a karịa ịnwa ịme otu atụmatụ ya. IS gbalịrị igbanwe okwu na usoro nhazi nke jihadism zuru ụwa ọnụ site na imepụta usoro ọzọ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mmekọrịta mmadụ na ibe, na ọnọdụ akụ na ụba nke ndụ nke oge a, ebe ndị Alakụba nwere ike ịkwaga iji bie ezigbo ndụ Alakụba, n'okpuru nchebe nke emir na-achị achị site na iwu Alakụba. Dabere na ọgụgụ nke akụkọ akụkọ jihadist, IS enwetawo ihe Osama bin Laden zubere, ozugbo ihe niile ziri ezi dabara. E lere ya anya na mbara ala Alakụba, echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị sitere na nke jihaddism zuru ụwa ọnụ, IS kwenyesiri ike na ọ ghọtara ụfọdụ atụmatụ ọnụ ọgụgụ nke ndị ọgụgụ dị ka Hasan al-Banna na Mawlana Mawdudi. N'ezie, ndị guzobere Alakụba doro anya na ịrọ òtù na arụrụala nke IS ga-abụ nsogbu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị nnupụisi. Mana n'oge akụkọ ihe mere eme ugbu a, oke ọchịchị na ezi ọchịchị bụ ihe metụtara na Middle East.
Na nke a bụ ihe miri emi dị mkpa nke iyi egwu ndị agha nke IS: ọ bụ ihe ncheta dị njọ nke ọdịda ọdịda nke ụlọ mba na mpaghara ahụ, nke mba ụwa nyere aka, yana ikike metụtara Alakụba / okpukperechi imebi Muslim- imirikiti mba ndị na-emepebeghị iwu gbasara mmekọrịta na mmekọrịta mmekọrịta okpukperechi. Ejiri nlezianya lee anya, IS bụ ngosipụta nke azụmahịa na-enweghị nsogbu nke usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, eziokwu nke IS maara nke ọma. Mgbasa echiche nke ya nwere ike iyi asụsụ dị iche site na oge na ebe dị iche, mana ọ bụ okwu a na-echekwa n'okwu Alakụba nke a na-agwa ndị mmadụ dabara na nkụda mmụọ nke oge a na ụzọ dị iche iche esi tinye ndị Alakụba, ọtụtụ mgbe na-eche echiche nke ọma, site n'aka ndị na-eme ihe nkiri dị iche iche. ndị nwe obodo, ndị ọdịbendị ọdịbendị, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị Alakụba, na ndị ji jihadists ugbu a) iji dozie nkụda mmụọ ndị ahụ. Ndị mmadụ nọ n'okpuru ọchịchị IS nwere ike ọ gaghị adọta ha n'echiche jihadi ya ma ọ bụ nkọwa ọjọọ nke iwu Alakụba, mana enwere ike imeri ndị mmadụ ma ọ bụ, ma ọ dịkarịa ala, mee ka obi dajụọ ha site n'inye ndị ọrụ nke ọrụ mmadụ yana usoro, ọ bụ ezie na ọ bụ mkpagbu, ndụ ụbọchị niile. A sị ka e kwuwe, ndị ọchịchị nke mba gara aga amabeghị maka ọchịchị amamihe ha. Yabụ IS na-egwu oge, na-anwa ịrịọ mkpa kwa ụbọchị na egwu ịrọ òtù nke Sunnis na mpaghara dị nso, ime ka iyi ọha egwu na ebe ọzọ, na ịga n'ihu mgbasa ozi mgbasa ozi ya. IS egosila na ọ nwere ọkaibe karịa maka iji mgbasa ozi na mgbasa ozi ọdịnaya karịa ndị iro ya (Mazzetti and Gordon 2015). Nsogbu ka ukwuu maka ndị isi Arab na Western, IS nwere ozi doro anya na njirimara iji kwurịta okwu. Ozi a na njirimara a na-etowanye ike ka ogologo oge IS ka dị, maka mmeri, na naanị ikike nke ihe dị ka IS iji lanarị bụ ihe ịrịba ama nke ihe ịga nke ọma, nwere ikike ịmepụta ezi ndị kwere ekwe n'etiti ndị bi na ya na karịa .
Bin Laden, Osama. 2005. Ozi maka :wa: Nkwupụta nke Osama bin Laden. Onye Bruce Lawrence deziri. James Howarth sụgharịrị. London: Ntughari.
Cockburn, Patrick. 2015. Nbili nke Ala Islam: ISIS na New Sunni Revolution. London na New York: Verso.
Creswell, Robyn na Bernard Haykel. 2015. "Usoro agha." The New Yorker, June 8, 15: 102-08.
Dabiq . Nke 1-9.
Devji, Faisal. 2005. Okirikiri ala nke Jihad: Militancy, Omume, Modernity. Ithaca, NY: elllọ ọrụ University nke Cornell.
Haykel, Bernard. 2009. "Na Nature nke Salafi Echiche na Omume." Pp. 33-57 Na Global Salafism: okpukpe ohuru nke Islam, nke Roel Meijer dere. New York: Mahadum University nke Columbia.
Akuko Alakụba Ala. Nke 1-4.
Kenney, Jeffrey T. 2006. Muslim Rebels: Kharijites na Politics of Extremism in Egypt. New York: Oxford University Press.
Mazzetti, Mark na Michael R. Gordon. 2015. "Isis na-emeri Social Media Agha, US kwubiri." The New York Times, June 13, A1.
Schmidtt, Eric. 2015. "A wakporo Isis Amịrị a Trove nke ọgụgụ isi." The New York Times, June 9, A1.
Taub, Ben. 2015. "Njem ka Jihad." The New Yorker, June 1, 38-49.
Weiss, Michael na Hassan Hassan. 2015. ISIS: N'ime Agha nke ụjọ. New York: Ihe omuma.
Wright, Lawrence. 2006. "The Master Plan." The New Yorker, Septemba 11, 49-59.